Ho Fiarovana, Ilain’ny Mpanao Gazety Shinoa Ny Lalàna Mifehy Ny Fanaovana Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2016 15:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, русский, Italiano, Español, English
Any amin'ny ambaratonga ambany indrindra ny fahalalahan'ny gazety Shinoa araka ny fanasokajian'ny Reporters Without Borders, taona 2015. Pikantsary tamin'ny fàfana
“Any Shina, asa itatazana eso sy fandrahonana ny maha-mpanao gazety” hoy ny mpanao gazety tranainy iray any Beijin tamin'ity mpanoratra ity indray mandeha.
Manomboka amin'ireo mpanao gazety tsotra esoin'ny olona ho miankin-doha aminà antoko ka hatramin'ireo muckrakers ( mpanao gazety mitatitra ny resaka kolikoly sy ny heloka bevava) mpanao fanadihadiana rahonana noho ny fampisehoana ny lafiny tsy mazava amin'ny zava-mahagaga amin'ny toekarena Shinoa, ny mpanao gazety rehetra any Shina dia voasakan'ny tsy fisian'ny lalàna mifehy ny haino aman-jery mamaritra ny zony sy ny andraikiny.
Ny 10 Martsa, nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny Kongresy Nasionalim-bahoaka (NPC) faha-14, fivoriana isan-taona fanaon'ny antokon-draharaha fototra mpanao lalàna Shinoa natao tany Beijin, dia niadiana hevitra indray ny momba ny tsy fisian'ny antsipirihan-dalàna mifehy ny haino aman-jery amin'ny seha-panjakana any Shina.
Nametrahan'ny mpanao gazety Shinoa-Amerikana avy amin'ny The China Press (Ny gazetin'i Shina) avy any Etazonia fanontaniana variraraka ny delege tao amin'ny kongresy :
Ny fanontaniako : Efa taona maro no niadiana hevitra ny lalàna momba ny gazety, manontany tena aho raha toa ka misy fandaharam-potoana ho amin'izany [ famolavolàna lalàna izany] ? raha misy, azonareo aseho ve ? raha tsia, inona no antony ? Nahoana no sarotra ny mamorona lalàna mifehy ny gazety ho an'i Shina ?
Na izany aza, haingana no namalian'ilay delegen'ny NPC ilay fanontaniana : ” Moa ve ny mpanao gazety vahiny rehetra te-hametraka fanontaniana momba ny asan'ny mpanao lalànanay ? Raha tsia, mifarana eto izao ny valan-dresaka ho an'ny gazety.”
Niteraka tosakà fanehoan-kevitra tao amin'ny Weibo mitovy amin'ny Twitter any Shina ny fandefasana mivantana ny lahatsarin'ilay adihevitra tamin'ny foiben'ny fahitalavim-panjakana Shinoa (CCTV).
Diso fanantenana tamin'ny valintenin'ny delegen'ny NPC i Wang Zhijun, mpanao gazety mpanao fanadihadiana.
Hatramin'ny naha-mpanao gazety ahy tamin'ny 2000 no efa nitaky ny lalàna mifehy ny fanaovana gazety izay afaka hiaro ny mpanao gazety sy ny [zony] amin'ny resadresaka ataon'ny mpiasam-panjakana mahasosotra izahay. Enina amin'ny folo taona aty aoriana, mbola izany ihany no adin'ireo tanora namako. Malahelo be aho eo am-pijerena [ity lahatsary ity].
Miharatsy ny tontolon'ny haino aman-jery
Nampatsiahivin'io mpanao gazety io ho toy ny ohatry ny faharavan'ny tontolon'ny mpanao gazety Shinoa ny raharahan'ny mpanao gazety Zhang Yougsheng , mialohan'ny nametrahana ireny fanontaniana ireny.
Zhang Yongsheng, izay niasa tamin'ny gazety Lanzhou Morning any amin'ny faritanin'i Gansu, avaratra andrefan'i Shina, dia fantatra tsara tao an-toerana noho ireo tatitra fanadihadiana an-taona maro nataony.
Nosamborin'ny mpitandro filaminana i Zhang rehefa nitatitra ilay firehetana tany Wuwei, tanàna manakaiky ny renivohitr'i Lanzhou tamin'ny volana Janoary.
Na dia efa nahazo fampitandremana ny mba tsy hitatitra ilay afo aza izy, dia mbola nandeha tany an-toerana ihany, toerana izay efa niandrasan'ny mpitandro filaminana hisamborana azy.
Nanome didy ny hitànana an'i Zhang am-ponja noho ny fanondranana olona sy ny fanambakàna tamin'ny 2009 ny sampan-draharaham-pitsarana any Gansu.
Nomen'ny mpitandro filaminana tany Wuwei fahafahana arahana fepetra ihany i Zhang nony farany rehefa notànana am-ponja iray volana, notsipahan'ny sampan-draharaham-pitsarana ny vesatra nanenjehana azy ho nanao fanondranana olona saingy nohizingizininy ny vesatra momba ny fanambakàna. Niangaviana mba hangiana i Zhang taorian'izay.
Tsy nanome porofo fanamarinana ny ezaka nataon'i Zhang mba hanambakàna sy hametsifetsena ny mpiasam-panjakana amin'ny vola 5.000 Yuan ( 800 dolara eo ho eo) ny sampan-draharaham-paritry ny fitsaràna, na teo aza ny antson'ny mpanao gazety sy ireo mpisolovava ny hanaovana izany.
Malaza amin'ny tsy fahamatorany ny rafi-pitsarana Shinoa. Matetika dia terena hanaiky ny vesatra hanenjehana azy ireo voampanga ho fepetry ny fanafahana na ny famotsorana azy arahana fepetra azy.
Nolazain'ny naman'i Zhang iray fa nampijalian'ny mpitandro filaminana ara-batana sy ara-tsaina i Zhang nandritra ny fakàna am-bavany azy.
Ny sampana iray filazambaovaon'ny Tencent dia nanamarika taorian'ny nisamborana azy fa ny tatitra tsy azo hozongozonina nataon'i Zhang taloha dia nampifohafoha volo ireo manampahefana maro tao an-toerana.
Nangataka fanazavana momba ny fizotry ny raharaha Zhang i Tu Zhonghang, mpanao gazety miaraka amin'ny Beijing News , nandritra ny valan-dresaka tamin'ny delegen'ny NPC tany Beijing, saingy mbola tsy noraharahiana ihany.
Nomarihin'ny Komity Miaro ny Mpanao gazety, fikambanana tsy mitady vola any New York, tamin'ny tatitra isan-taona 2015 fa mpanao gazety 49 no voafonja any Shina, ny ampahefatry ny 200, isa fantatra manerantany.
Tahotra ny Fikorontanana ara-tsosialy
Nazavain‘i Zhan Jiang, mpampianatra ao amin'ny Sekoly Iraisam-pirenena fianarana ny asa fanaovana gazety sy ny Serasera ao amin'ny sampam-pampianarana vahinin'ny Oniversite any Beijin tamin'ny resadresaka niarahany tamin'ny People's Daily tamin'ny 2009 ireo lafin-javatra sasany manakana ny fanaovana ny lalàna mifehy ny asa fanaovana gazety.
Efa hatramin'ny taona 1980 ny governemanta Shinoa no nandrafitra lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety, hoy ny fanamarihan'i Zhan.
Na izany aza, taorian'ny rà nandriaka noho ny hetsi-panoherana tao amin'ny Tiananmen Square tamin'ny 1989, sy ny faharavan'ny Firaisana Sovietika, dia niato ny asa fandrafetana noho ny ahiahy ny mety hisian'ny fikorontanana ara-tsosialy.
Manohana ny fanaovana ny lalàna mifehy ny asa fanaovana gazety i Profesora Zhan :
Baikon'ny lalàm-panorenana ny fahalalahan'ny fanehoankevitry ny olom-pirenena, amin'ny fivoriana, ny fikambanana ary fanaparitahana sns… izay fomba sy fitsipika tsara saingy sarotra ampiharina [ amin'ny fanatanterahana]. Mety hanana ny hevitry ny Lalàm-panorenana sy hanampy amin'ny fampiharana izany ny toetra raiki-tampisaka amin'ny lalàna mifehy ny fanaovana gazety. Afaka manampy amin'ny ny asa fanaovana gazety sy mampifandray ny sehatra ara-tsosialy ary manome zo ny mpanao gazety mba hanao resadresaka, tatitra, fanamarihana sy ny sisa ity lalàna ity. Mamela ihany koa ny mpanao gazety handray andraikitra sasantsasany, hametra ny hadalàna [ fanaovana gazety amin'ny tsy fiheverana na tsy fandraisana andraikitra ] mety hatao aminà fiarahamonina na olom-pirenena tsotra.
Izao no vakin'ilay peta-drindrina goavana: “Mifikitra amin'ny fitsipiky ny antoko ny CCTV. Raisinay amim-pahatsorana tanteraka ny fanehoankevitrareo.” (Sary avy amin'ny Weibo)
Fa hafa ny fahitan'ireo henjam-pihetsika ao anatin'ny antoko ny zavatra rehetra.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Febroary, nitsidika ireo haino aman-jety teo an'ny fanjakana ny filoha Shinoa Xi Jinping – ny masoivohom-baovao Xinhua, ny People’s Daily ary ny Chinese Central Television (CCTV), nilaza ny politika vaovaon'ny antoko, ho henjana ny fanaraha-maso ny haino aman-jerim-panjakana.
Mandritra izany fotoana izany, inoan'i Chen Yun, mpitarika ambony taloha tao amin'ny Antoko Kaominista fa tsy misy ilàna ny fanaovana lalàna mifehy ny asa fanaovana gazety , satria” mety manome alàlana ny hafa hanararaotra antsika izany” :
Tamin'ny fanapahan'ny Kuomintang [talohan'ny Kaominista], dia natao ny lalàna mifehy ny asa fanaovana gazety, izahay mpikambana ao amin'ny antoko Kaominista dia nandinika tsara ny voalazany, nahazo tsara izany ary naka tombony tamin'izany [ mba ahazoana mifehy an'i Shina amin'ny fivoizana ny fanentanam-baovao ]. Ankehitriny, anay ny fitondrana, heveriko fa tsara kokoa ny tsy hamelàna ny famolavolàna ny lalàna mifehy ny fanaovana gazety fa mety hanararaotan'ny hafa antsika izany. Rehefa tsy misy ny lalàna, raisintsika ny andraikitra ary afaka mifehy [ny haino aman-jery] araka izay itiavantsika azy isika.